Axmad | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 3
Author Archives: Axmad	Dhagayso Warka Subaxnimo.
Si aad u hesho xaqiiqda dhabta ah ee ka taagan dalka iyo dibadda, dhagayso wararka kabax Idaacadda Alfurqaan. Halkan ka dhagayso War Subax 27 02 2017.lite	Read More »
Dab xoogan oo ka kacay Suuqa Bakaaraha.
Magaalada Muqdisho waxaa si aad ah looga arkayaa holac iyo qiiiq ballaaran oo ka baxaya Suuqa ugu weyn Soomaaliya oo ah Suuqa bakaaraha, kadib markii uu dab xoogan qabsaday qeybo kamid ah Suuqa. Dabkan oo aan la ogeyn illaa iyo hadda waxa dhaliyay ayaa la sheegayaa inuu saacadba saacadda ka dambeyso sii fidayo, isagoona gebi ahaaanba baaba’iyay xarumo ganacsi oo ...	Read More »
Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada waxa uu kamid yahay barnaamijyada habeen waliba ka baxa Idaacadda Alfurqaan, waxaana lagu soo qaataa waraysiyo lagu falanqeynayo xaaladda dalka. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada 25 02 2017 Read More »
Qaraxyo waaweyn oo ruxay bartamaha magaalada Ximis.
Rag hubeysan oo watay suumanka waxlaha qarxa ay ka buuxaan ayaa weeraro xoogan waxay ku qaadeen xarumo nidaamka Nusayriga uu ku leeyahay magaalada Ximis ee dalka Suuriya. Sida ay sheegayaan wararka horudhaca ah ee laga helayo weeraradan, waxaa ragga hubeysan ay weerareen xarunta maamulka iyo milliteriga magaalada Ximis, waxaana dhacay lab qarax oo aad u waaweyn kuwaas oo gallaaftay nolosha ...	Read More »
Nidaamka Nusayriyga oo dad ku xasuuqay Dimishiq.
Diyaaradaha nidaamka iyo mallleeshiyaadkiisa ayaa ku kacaya gabood fallo waaweyn ooo ka dhan ah dadka Muslimiinta, waxaana muuqaneysa in maalmihii ugu dambeeyay uu nidaamku xooga saaray magaalooyinka iyo deegaanada dhaca duleedka magaala madaxda dalkaas ee Dimishiq. Wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya in diyaaradaha Nidaamka maalintii shalay ay sawaariikh waaweyn ku garaaceen deegaan dhaca bariga magaalada Dimishiq, iyagoona halkas ...	Read More »
Wararka ka imaanaya dalka Austrelia ayaa sheegaya in diyaarad rakaab ay ku dhacday suuq ganacsi oo ku yaala gudaha dalkaas, diyaaradda oo ahayd noocyada yar yarka ah ee dadka yar qaada ayaa ka leexatay wadadii ay ku socotay, waxanaa ay ku dhacday dabaq dheer oo shirkad ganacsi ah oo ku yaala meel u dhow magaalada Malbarun ee dalka Austrelia. Saraakiil ...	Read More »
AlQAACIDA oo ku baaqday in loo aargudo Sheekh Cumar Cabdi Raxmaan.
Faracyada Alqaacida ee Jaziiradda carabta iyo Maqribul Islaam ayaa soo saaray bayaan taczi ah oo ku saabsan geerida Sheekha caalimka ahaa ee Dr Cumar Cabdi Raxmaan Raximahullaah. Bayaankan oo ku qoran luuqadda Carabiga islamarkaana si wadaji ah uga soo baxay mu’assasaadka Andalus iyo Al-Malaaxim ayaa umadda islaamka siday u dhantahay gaar ahaan ahalka Sheekha waxaa looga tacziyeeyay geeridii naxdinta badneyd ...	Read More »
Goormuu ahaa xiriirkii ugu dambeeyay ee Sheekh Cumar la sameeyo ahalkiisa?
February 19, 2017	1 Comment
Cabdi Raxmaan oo kamid ah wiilasha uu dhalay Sheekh Cumar Cabdi Raxmaan ayaa ka warbixiyay xiriirkii ugu dambeeyay oo uu aabihiisa lasoo sameeyo qoyska, isagoona sheegay macluumad dheeri ah oo ku aadan xaaladihii ugu dambeeyay Sheekha. Cabdi Raxmaan ayaa sheegay in aabihiisa uu labo todobaad ka hor lasoo xiriiray hooyadiisa, uuna u sheegay inuu la kulmayo ciriiri iyo dhibaatooyin uga ...	Read More »
Waa kuma Sheekh Cumar C/Raxman oo ku geeriyooday dalka Maraykanka.
Kudhowaad sodon sano oo xarig ah kadib, waxaa la shaaciyay istish-haadka Sheekha caalimka ah Cumar Cabdi Raxmaan, kaas oo u xirnaa dowladda Maraykanka. Sheekh Cumar Cabdi Raxmaan oo ah caalim muslim kana soo jeeda dalka Masar, ayaa waxaa dowladda Maraykanka ay xabsiga u taxaabtay sanadkii 1993 kadib markii ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa qaraxyo xilligaas ka dhacay magaalada ...	Read More »
Ra’iisul Wasaaraha Yahuudda oo codsaday in buuraleyda Jowlaan loo aqoonsado in Yahuuddu leeyihiin.
Bin Yamin Natanyahu ayaa socodaal ku jooga dalka Maraykanka, isagoona kulamo la qaatay madaxda dalkaas oo uu ugu horeeyo madaxweynaha cunsuriga Donalad Trump. Kulamada labada dhinac oo warbaahintu ku tilmaameen inuu ahaa mid sarreeya, islamarkaana laga dareemayay jacaylka uu Trump u qabo Yahuudda ayaa waxaa intooda badan looga hadlayay muranka u dhexeeya Yahuudda iyo filastiiniyiinta, kaas oo soo jiitamayay tobanaan ...	Read More »
Page 3 of 45«12345	»	102030...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan